No. 1813, Monday, May 28, 2018 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 1813, Monday, May 28, 2018
၁၃၈၀ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၄ ရက် (တနင်္လာ၊ မေ ၂၈၊ ၂၀၁၈)
မုန်တိုင်းကို အနီရောင်အဆင့် မိုးဇလသတ်မှတ်
အငြင်းပွား ရေပိုင်နက်ရှိ တရုတ်ထိန်းချုပ်ရာ ကျွန်းအနီး အမေရိကန် စစ်သင်္ဘောများ ချဉ်းကပ်ခဲ့မှုကို တရုတ်သတိပေး
ပိုင်နက် အငြင်းပွားရာ ရေပြင်တွင် အမေရိကန် စစ်သင်္ဘောများ ချဉ်းကပ် ခုတ်မောင်းမှုကြောင့် တရုတ်ရေတပ်က သတိပေးခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ အင်အားစုနှင့် သမ္မတကြား သဘောကွဲလွဲမှုကြောင့် ပိုမို ရှုပ်ထွေးလာသည့် အီတလီနိုင်ငံရေး
သမ္မတကို ရာထူးမှ ဖြုတ်ချရေး မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရန် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ အင်အားစု ခေါင်းဆောင်က တောင်းဆိုလိုက်ပြီးနောက် အီတလီ နိုင်ငံရေး အခြေအနေက ပိုမို၍ ရှုပ်ထွေးလာခဲ့သည်။
ထိုင်းရေနံကုမ္ပဏီက မြန်မာအလုပ်သမားရှစ်ဦးကို တရားစွဲဆို
မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့ တွင် လေဆီများမီးရှို့မှုကို ကန့် ကွက်ခဲ့သည့် မြန်မာ့အလုပ်သမား များအနက် ရှစ်ဦးကို တစ်ဦးလျှင် ကျပ်သိန်း ၂,၀၀၀ ခန့် (ကန်ဒေါ် လာတစ်သိန်းခွဲ) ရလိုမှုဖြင့် ထိုင်းရေနံကုမ္ပဏီ PTTEP က တရားစွဲထားကြောင်း ထိုင်းကုမ္ပဏီနှင့် မြန်မာအလုပ်သမားများက ပြော သည်။ အလုပ်သမားများသည် အ လုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား ပဋိညာဉ် ကို ချိုးဖောက်သည်ဆိုကာ ကုမ္ပဏီက ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်း ခရိုင်တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုထားကြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားတစ်ဦးက ပြောသည်။
ကရင်လွှတ်တော်တိုင်စာကော်မတီရှိ တိုင်စာ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် မြေယာပြဿနာများ ဖြစ်နေ
ကရင်ပြည်နယ်လွှတ် တော် ပြည်သူများ၏ တိုင်ကြား စာကော်မတီသို့ ပေးပို့သည့် တိုင် စာများ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် သည် လယ်ယာမြေပြဿနာများ ဖြစ်ကြောင်း ယင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်တူးက ပြောသည်။
အားကာသိပ္ပံ (က) သရေကျသော်လည်း အမှတ်ပေးဇယားကို ဆက်လက်ဦးဆောင်
အသက် (၂၁)နှစ် အောက် လူငယ်လိဂ်ပြိုင်ပွဲ ပွဲစဉ် ၁၄ ဒုတိယရက်တွင် ရန်ကုန်အ သင်း နိုင်ပွဲရသော်လည်း အား ကာသိပ္ပံ (က) နှင့်မကွေးအသင်း တို့ သရေရလဒ်ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်း မန္တလေးခြေစမ်းခရီးစဉ်တွင် ယူနတီလူငယ်ကို အနိုင်ရ
အာဆီယံပြိုင်ပွဲအကြို ပြင်ဆင်နေသည့် မြန်မာ့လက် ရွေးစင်အမျိုးသမီးဘောလုံး အ သင်းသည် မန္တလေးခြေစမ်းခရီး စဉ် ဒုတိယပွဲတွင် ယူနတီလူငယ် အသင်းကို ၄-၁ ဂိုးဖြင့် ဂိုးပြတ်အ နိုင်ရခဲ့သည်။
ဗီယက်နမ်ဖိတ်ခေါ်ဘော်လီဘောပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာက ကာဇက်စတန်ကို ရှုံးနိမ့်
ဗီယက်နမ်ဖိတ်ခေါ် ဘော်လီဘောပြိုင်ပွဲအုပ်စု တတိယပွဲတွင် မြန်မာအသင်းက ကာဇက် စတန်အသင်းကို ၃-၂ ပွဲဖြင့်ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။
တရုတ်အသင်းကို ရှုံးသော်လည်း ကစားသမားများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကျေနပ်အားရဟု မြန်မာနည်းပြချုပ်ပြော
မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ဘောလုံးအသင်း အနေဖြင့် တရုတ်အသင်း နှင့် ခြေစမ်းပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်သော်လည်း ကစားသမားများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အားရကျေနပ်မှုရှိကြောင်း နည်းပြချုပ်အန်တွမ်နီဟေးကပြောသည်။
မင်းသန့်မောင်မောင်ကို အောင်မြင်တဲ့ ဒါရိုက်တာဖြစ်စေချင်တဲ့ မေသန်းနု
သားဖြစ်သူ မင်းသန့် မောင်မောင်ကို သရုပ်ဆောင် ထက် ဒါရိုက်တာအလုပ်ကို ပိုအားပေးကြောင်း မေသန်းနုက ပြော သည်။
‘ငါ့ကိုနမ်းတဲ့မုန်တိုင်း’ ဇာတ်ကားထဲကလို နှစ်ယောက်ကြား ဗျာများဖူးတဲ့ ဖွေးဖွေး
ဇွန်လ ၁ ရက်တွင် ရုံတင်ပြသတော့မည် ‘ငါ့ကိုနမ်းတဲ့ မုန် တိုင်း’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၌ ၎င်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရသော ဇာတ်ရုပ်နှင့်ခပ်ဆင်ဆင်တူသော အခြေအနေတစ်ခု ငယ်ရွယ်စဉ်က ကြုံခဲ့ရဖူးကြောင်း သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးက ပြောသည်။
ကလေးဝမြို့အနီး ဗဟိုပြုသည့်ငလျင် ဝန်းကျင်ရှိ မြို့နယ်အချို့ ခံစားရ
စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးဝ မြို့အနီးတွင် ရစ်ခ်ျတာစကေး ၄ ဒသမ ၅ အဆင့်ရှိ ငလျင်တစ်ခု ယမန်နေ့ နံနက်က လှုပ်ခတ်ပြီး ဘေးပတ်ဝန်းကျင် မြို့နယ်အချို့ ၌ ငလျင်ဒဏ်ခံစားခဲ့ရသည်။
စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ ရပ်ဆိုင်းခဲ့၍ အင်ဂျန်းယန်ဒေသရှိ စစ်ရှောင်၂၀၀ ခန့် နေရပ်ပြန်
တိုက်ပွဲများကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသော အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာ နှစ်ရွာမှ လူ ၂၀၀ ခန့်သည် နေရပ်သို့ ပြန်ပြီဖြစ်ကြောင်း အင်ဂျန်းယန်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်က ပြောသည်။
နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှု အလေးပေးဆောင်ရွက်ရန် UNA ထုတ်ပြန်
နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေး နွေးမှု အဆင့်ဆင့်တွင် ပြည်သူ လူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကို အလေးပေးဆောင်ရွက်ရန် တိုင်း ရင်းသားပါတီ ၁၅ ခု ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ထားသည့် စည်းလုံးညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ မဟာ မိတ်အဖွဲ့ (UNA) က မေလ ၂၇ ရက်၌ သဘောထားကြေညာ သည်။
ပြည်သူကိုရိုက်နှက်သော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးကို ပုဒ်မသုံးခုဖြင့် အမှုဖွင့်
မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့နယ် ကျောက်ရေတွင်းကျေးရွာသားတစ်ဦးကို ရိုက်နှက်သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးကို ပုဒ်မသုံးခုဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ပေါင်မြို့မရဲစခန်းမှ စခန်းမှူး ဒုရဲမှူးထွန်းဇော်ဦးက ပြောသည်။
ဦးကျော်ဝင်းကိစ္စ သမ္မတဆုံးဖြတ်ချက် စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်း အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးပြောကြား
YBS ယာဉ်တစ်စီးဘီးပေါက်ပြီး လမ်းလျှောက်နေသူနှစ်ဦးကိုဝင်တိုက်
ဘုရင့်နောင်လမ်းမပေါ် တွင် YBS(၈၅)ယာဉ်တစ်စီး ဘီး ပေါက်ကာ လမ်းဘေးဓာတ်တိုင် ကို ၀င်တိုက်ပြီး လမ်းလျှောက်နေ သူနှစ်ဦးကို တိုက်မိခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူ ၆၀ ကျော်ကို မြန်မာလက်ခံ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်ပြုသူများ အပါအဝင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူ ၆၀ ကျော်ကို အကြမ်းဖက်မှုများတွင် ပါဝင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ စိစစ်၍ ငါးခူရ ပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းသို့ ပို့ ဆောင်ထားကြောင်း နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံးက ယမန်နေ့က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
တူမဖြစ်သူကို အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြံစည်သူအား သမီးအရင်းက အမှုဖွင့်
တူမဖြစ်သူကို အဓမ္မပြု ကျင့်ရန် ကြံစည်ခဲ့သည့် ဖခင်အား အရေးယူပေးပါရန် သမီးအရင်း ကမေလ ၂၆ ရက် ညက လာရောက်အမှုဖွင့် တိုင်တန်းခဲ့ ကြောင်း မွန်ပြည်နယ် သထုံမြို့နယ် သိမ်ဆိပ်နယ်မြေရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
၀န်ကြီးအပြောင်းအလဲက ပေးသော သင်ခန်းစာ
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းသည် လွန်ခဲ့သည့် သုံးရက်ကစ၍ ရာထူးမှနုတ်ထွက်သွားပြီဖြစ်သော်လည်း နောက် ဆက်တွဲဂယက်များ က မပြီးဆုံးသေးပေ။ ကြိုတင်သတင်းများထွက်ခဲ့ သည့်အတိုင်းပင် ဦးကျော်ဝင်းက သမ္မတထံနုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်က ဦးကျော်ဝင်း၏ သဘောဆန္ဒအ လျောက်ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုကြောင်း မေလ ၂၅ ရက်တွင်အမိန့် ကြော်ငြာလွှာထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သော် အဂတိနှင့်ပတ်သက်၍တိုင် ကြားခံထားရပြီး အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်၏စုံစမ်းစစ်ဆေး ရေးအဖွဲ့ဖြင့် စစ်ဆေးခံနေရသောဦးကျော်ဝင်းအပေါ် တိုင်ကြားမှုမှန်၊ မမှန်၊ အရေးယူခံရနိုင်ခြင်းရှိ၊ မရှိကို ပြည်သူများအထူးစိတ်ဝင်စား လျက်ရှိကြ၏။
မုန်တိုင်းငယ် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းအနီး ရောက်လာနိုင်ပြီး ဒေသကိုးခု နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ကြောင်း သတိပေး
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှိ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းအနီး ရောက်လာနိုင်ပြီး ဒေသကိုးခုတွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ကြောင်း ဒေါက်တာထွန်းလွင်နှင့် မိုးဇလဌာနက သတိပေးသည်။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ပိုင်း၌ ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် မေလ ၂၉ ရက်တွင် မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်လာနိုင်ပြီး ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းအနီးသို့ ရွေ့လျားနိုင်ကြောင်း မိုးလေဝသပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်က မေလ ၂၄ ရက်ကတည်းက ကြိုတင်ခန့်မှန်းသတိပေးခဲ့သည်။
သိန္နီမြို့တွင် အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းနှစ်ဦး တိုက်ခိုက်ခံရ
မန္တလေး-မူဆယ်ပြည် ထောင်စုလမ်း သိန္နီမြို့အနီးတွင် မသင်္ကာဖွယ်ကားတစ်စီးကို လိုက်လံဖမ်းဆီးသည့် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၀န်ထမ်းနှစ်ဦး သံတုတ်ဖြင့် ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ပြည်ပရောက် မြန်မာ မိသားစုများ၏ အလှူငွေဖြင့် နှစ် စဉ်ချီးမြှင့်သည့် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဆုကို ယခုနှစ်အတွက် မွတ်စလင် ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံက ဆွတ်ခူးရ ရှိသည်။
ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ ဘာသာပေါင်းစုံအဖွဲ့ဝင်များ မောင်တောဒေသသို့ သွားရောက်လေ့လာ
သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး သူရဦးအောင်ကို နှင့် မြန်မာနိုင်ငံကက်သလစ်ဂိုဏ်း ချုပ်ဆရာတော် ကာဒီနယ် ချားလ်စ်ဘို ဦးဆောင်သည့် နိုင်ငံ တကာနှင့် ပြည်တွင်းမှ Religions for Peace (RfP) နှင့် ဘာသာ ပေါင်းစုံအဖွဲ့သည် မေလ ၂၇ ရက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်မောင် တောဒေသသို့ သွားရောက်လေ့ လာခဲ့သည်။
ထိုင်းတောင်ပိုင်းရှိ မြန်မာလုပ်သားများ၏ ခံစားခွင့်ပြဿနာ မြို့နယ်ရုံးများသို့ဦးစွာတိုင်ကြားပေးရန် မြန်မာသံရုံးအသိပေး
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ သစ်စက်ရုံများအဆင်မပြေဖြစ် နေ၍ မြန်မာလုပ်သားများခံစား ခွင့်ကိစ္စ တိုင်ကြားလိုပါက ထိုင်း နိုင်ငံ အလုပ်သမားကာကွယ်ရေး နှင့် လူမှုဖူလုံရေး (ဆ၀ါဒီကန်ရုံး)သို့ တိုင်ကြားပေးရန် မြန်မာသံရုံး က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
လီဗာပူးဂိုးသမား လိုရစ်ကားရီးယပ်စ် အသက်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေး
ယူကရိန်းနိုင်ငံ ကိဗ်မြို့ ၌ ရီးရဲလ်ကို ၃-၁ ဂိုးဖြင့် ရှုံးနိမ့် ခဲ့သော ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲ တွင် သာမန်မဟုတ်သော အမှား များ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လီဗာပူးဂိုးသမား လိုရစ်ကားရီးယပ်စ်အား အသက်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ မာဆေးဆိုက် ရဲတပ်ဖွဲ့က စုံစမ်းစစ်ဆေးနေ သည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံဖွား ကားရီး ယပ်စ်နှင့် ၎င်း၏မိသားစုကို ခြိမ်း ခြောက်မှုပေါင်း ရာနှင့်ချီရှိပြီး လူမှုကွန်ရက်တွင်လည်း အမုန်းထား ပြောဆိုမှုများ ရင်ဆိုင်နေရသည်။
အီဂျစ်အသင်း၏ ကမ္ဘာ့ဖလား အဖွင့်ပွဲစဉ်များကို ဆာလက် လွဲချော်မည်
လီဗာပူးတိုက်စစ်မှူး မိုဟာမက်ဆာလက်သည် ချန်ပီ ယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲတွင် ရီးရဲလ် နောက်ခံလူ ရာမို့စ်၏ ပယောဂမကင်းသော ပခုံးထိခိုက်မှုကြောင့် အချိန်တစ်ခုအထိ အနားယူရမည်ဖြစ်ကာ ၎င်းအနေဖြင့် အီဂျစ်အသင်း၏ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလား အဖွင့်ပွဲစဉ်အချို့ လွဲချော်မည်ဖြစ် သည်။
ကျောင်းကြို၊ ပို့ယာဉ်စနစ်သစ်တွင် ယာဉ်မောင်းလုပ်ကိုင်ရန် အမျိုးသမီး ခုနစ်ဦးအပါအ၀င် ၂၀၀ ကျော်လျှောက်ထား
ကျောင်းကြို၊ ပို့ယာဉ်စနစ်အသစ်တွင် ယာဉ်မောင်းလုပ်ကိုင်ရန် အမျိုးသမီး ခုနစ်ဦးအပါ အ၀င် ယာဉ်မောင်း ၂၀၀ ကျော် လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးသယ်ယူပို့ဆောင် ရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု အာဏာပိုင်အဖွဲ့ (YRTA) တာဝန်ရှိသူတစ် ဦးက ပြောသည်။ YRTA ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ယခုနှစ်ကျောင်းဖွင့်ရာသီတွင် စတင်ပြေးဆွဲမည့် ကျောင်းကြို၊ ပို့ယာဉ်များအတွက် ယာဉ်မောင်းနှင့် ယာဉ်ကြီးကြပ်များကို မေလ ၁၁ ရက်ကစတင်၍ လျှောက်လွှာများခေါ်ယူခဲ့သည်။ ထိုသို့ခေါ်ယူရာတွင် ယာဉ်မောင်းလုပ်ကိုင်ရန် အမျိုးသား ၂၁၅ ဦး၊ အမျိုးသမီး ခုနစ်ဦးနှင့်ယာဉ်ကြီးကြပ်လုပ်ကိုင်မည့် အမျိုးသမီး ၁၁၇ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၃၃၉ ဦးလာရောက်လျှောက်ထားခဲ့သည်ဟု အထက်ပါတာဝန်ရှိသူက ဆိုသည်။
ဒေါက်တာထွန်းလွင်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့် နာရီပိုင်းကြာ ဟက်ခံရ
မိုးလေဝသပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်၏ ဖေ့စ် ဘွတ်ခ်အကောင့် နာရီပိုင်းကြာ ဟက်ခံရပြီး နည်းပညာကျွမ်းကျင် သူတစ်ဦး၏အကူအညီဖြင့် ပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဒေါက် တာထွန်းလွင်က ပြောသည်။ ကြိုက်နှစ်သက်သူ (Like လုပ်ထားသူ) ၁၅ သန်းခန့်ရှိသော Tun Lwin အမည်ဖြင့် အသုံးပြုနေသောဒေါက်တာထွန်းလွင်၏ ဖေ့စ် ဘွတ်ခ်အကောင့်သည် မေလ ၂၇ ရက်နေ့လယ်တွင် ဟက်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။